တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ မလေးရှားနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Zahairi Baharim အားလက်ခံတွေ့ဆုံ | cincds
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်သည် မြန်မာ နိုင်ငံဆိုင်ရာ မလေးရှားနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Zahairi Baharim အား ယနေ့ မွန်းလွဲပိုင်းတွင် နေပြည်တော်ရှိ ဘုရင့်နောင်ရိပ်သာဧည့်ခန်းမဆောင်၌ လက်ခံ တွေ့ဆုံသည်။
အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲသို့ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့်အတူ ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်ရုံး(ကြည်း)မှ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး ရဲဝင်းဦးနှင့် တပ်မတော်အရာရှိကြီးများ တက်ရောက်ကြပြီး မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ မလေးရှားနိုင်ငံသံအမတ်ကြီးနှင့်အတူ စစ်သံမှူး Colonel Abdul Razak Haron နှင့် တာဝန်ရှိသူတို့တက်ရောက်ကြသည်။
ထိုသို့တွေ့ဆုံရာတွင် မြန်မာနိုင်ငံနှင့် မလေးရှားနိုင်ငံတို့သည် ရင်းနှီးသည့် မိတ်ဆွေ ကောင်းနိုင်ငံများဖြစ်ပြီး ကောင်းမွန်သည့်ဆက်ဆံရေးရှိသည့် အခြေအနေများ၊ မလေးရှား နိုင်ငံ၏ နိုင်ငံရေးဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲမှုအခြေအနေများ၊ နိုဗယ်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ် COVID-19 ရောဂါဖြစ်ပွားမှုအခြေအနေများနှင့် ရောဂါကူးစက်မှု ကာကွယ်ရေး လုပ်ငန်းများကို အလေးထားဆောင်ရွက်ရမည့်အခြေအနေများ၊ ရခိုင်ပြည် နယ်တွင် ဖြစ်ပွားလျက်ရှိသည့် ပဋိပက္ခများနှင့် ပတ်သက်၍ တပ်မတော်မှ တရားဥပဒေနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် အခြေအနေများ၊ စီးပွားရေးဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ ကို ပိုမိုတိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်နိုင်မည့် အခြေအနေများ၊ တပ်မတော်နှစ်ရပ်အကြား ဆက်ဆံရေးနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများကို တိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်သွားမည့် အခြေအနေ များအား ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာ အမြင်ချင်း ဖလှယ်ဆွေးနွေးခဲ့ကြကြောင်းသတင်းရရှိသည်။
တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျသညျ မွနျမာ နိုငျငံဆိုငျရာ မလေးရှားနိုငျငံ သံအမတျကွီး H.E. Mr. Zahairi Baharim အား ယနေ့ မှနျးလှဲပိုငျးတှငျ နပွေညျတျောရှိ ဘုရငျ့နောငျရိပျသာဧညျ့ခနျးမဆောငျ၌ လကျခံ တှဆေုံ့သညျ။
အဆိုပါတှဆေုံ့ပှဲသို့ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျနှငျ့အတူ ကာကှယျရေး ဦးစီးခြုပျရုံး(ကွညျး)မှ ဒုတိယဗိုလျခြုပျကွီး ရဲဝငျးဦးနှငျ့ တပျမတျောအရာရှိကွီးမြား တကျရောကျကွပွီး မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ မလေးရှားနိုငျငံသံအမတျကွီးနှငျ့အတူ စဈသံမှူး Colonel Abdul Razak Haron နှငျ့ တာဝနျရှိသူတို့တကျရောကျကွသညျ။
ထိုသို့တှဆေုံ့ရာတှငျ မွနျမာနိုငျငံနှငျ့ မလေးရှားနိုငျငံတို့သညျ ရငျးနှီးသညျ့ မိတျဆှေ ကောငျးနိုငျငံမြားဖွဈပွီး ကောငျးမှနျသညျ့ဆကျဆံရေးရှိသညျ့ အခွအေနမြေား၊ မလေးရှား နိုငျငံ၏ နိုငျငံရေးဖွဈပျေါပွောငျးလဲမှုအခွအေနမြေား၊ နိုဗယျကိုရိုနာဗိုငျးရပျ COVID-19 ရောဂါဖွဈပှားမှုအခွအေနမြေားနှငျ့ ရောဂါကူးစကျမှု ကာကှယျရေး လုပျငနျးမြားကို အလေးထားဆောငျရှကျရမညျ့အခွအေနမြေား၊ ရခိုငျပွညျ နယျတှငျ ဖွဈပှားလကျြရှိသညျ့ ပဋိပက်ခမြားနှငျ့ ပတျသကျ၍ တပျမတျောမှ တရားဥပဒနှေငျ့အညီ ဆောငျရှကျလကျြရှိသညျ့ အခွအေနမြေား၊ စီးပှားရေးဆိုငျရာ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျမှုမြား ကို ပိုမိုတိုးမွှငျ့ဆောငျရှကျနိုငျမညျ့ အခွအေနမြေား၊ တပျမတျောနှဈရပျအကွား ဆကျဆံရေးနှငျ့ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျမှုမြားကို တိုးမွှငျ့ဆောငျရှကျသှားမညျ့ အခွအေနေ မြားအား ရငျးနှီးပှငျ့လငျးစှာ အမွငျခငျြး ဖလှယျဆှေးနှေးခဲ့ကွကွောငျးသတငျးရရှိသညျ။